उपभोक्ताको मागको वर्तमान पुनरावृति वृद्धिले कपडा नवप्रवर्तन प्रवृत्तिलाई प्रेरित गरेको छ. माग पक्षले उत्पादनको अर्थमा अधिक ध्यान दिन्छ र भावनात्मक सुविधाहरूमा बढी ध्यान दिन्छ, अनि उपभोक्ताहरूले ध्यान दिएर ठोस उत्पादनहरूमा ध्यान दिनुदेखि लिएर उपभोगको अनुभवमा ध्यान दिनुसम्म परिवर्तन भएको छ. साथै, उपभोगको अवधारणाले पारिस्थितिक संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा बढी ध्यान दिन्छ, र हरी उपभोग मानिसका हृदयमा गहिरो जरा राखिएको छ. प्रकृतिबाट पुन: सिलु सेल्युलोज सामग्री, पुन: साइकल गर्न सकिन्छ, अपमानजनक, पर्यावरणीय पर्यावरण संरक्षण को प्रवृत्ति संग लाइन मा, र spinnability राम्रो छ, र फाइबर सामग्री को सबै प्रकारको "खेल". भिन्न प्रकारको विभेदित र कार्यात्मक पुन: उत्पन्न सेल्युलोज फाइबरहरूको निरन्तर विकास र नवीनताका साथ, त्यस्ता सामग्री अधिक र अधिक व्यापक रूपमा वस्त्र क्षेत्रमा लागू गरिएको छ.
(1) दृश्यको दृश्य पक्षमा राम्रो बनावट प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्. धेरै जसो घर कपडा कपडाहरु र कपडा कपडा राम्रो र सुरुचिपूर्ण को आवश्यकता छ, चिल्लो र चिल्लो, पूर्ण बनावट वा कणहरू, र चमकको भावना. धागा सुख्खा र एक समान हुनुपर्दछ, कम कपाल संग.
(2) देखावट र स्पर्श तहमा राम्रो बनावट प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्. शर्ट कपडा र घर कपडा किट नरम र महीन हुनुपर्छ, न कठोर र नरम र हड्डी. राम्रो नरमता कायम को आधार मा, सक्रियताको उच्च दर पनि आवश्यक हुनुपर्दछ. घरका कपडाका कपडाहरू नरम र आरामदायक हुन्छन्.
भौतिक विशेषताहरु अनुसार, प्राप्त गर्न सकिने सबैभन्दा राम्रो प्रभाव लाई बनाएर पुष्टि गर्न सकिन्छ "अवधारणा उत्पादनहरु", र नवीन सुविधाहरू पूर्ण रूपमा टेक्नोलोजिकल नवीनता र डिजाइन रचनात्मकता संयोजन गरेर प्रदर्शन गर्न सकिन्छ.
उदाहरणका लागि, उच्च गणना धागो विशेष Saterio Yoke लागि? BVF फाइबर, Weiqiao वस्त्र कं, लिमिटेड. शुद्ध स्पिनिंग र १००S माथि गणनाको धागो र उच्च गणना र उच्च घनत्व कपडाको विकास भयो, शुद्ध स्पिनि high उच्च काउन्ट यार्नको अनुकूलता प्रमाणित गरियो, र उच्च गणना यार्न को माध्यम बाट कपडा को बनावट सुधार, बुनेको कपडा नरम र चिल्लो हुन्छ, चमकदार साटन सतहले फेब्रिकलाई सुन्दर उपस्थिति दिन्छ, गुणको राम्रो भावना प्रतिबिम्बित गर्दै. अर्को उदाहरणको लागि, सेल्युलोज फाइबर सामग्री गर्मीको कपडामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ. आरामदायक बनावट प्राप्त गर्नका लागि, फेब्रिक क्रेप संगठन डिजाइनको साथ मिलेको मोटो धागोको उपयोग धागो धागो प्रभावको साथ सुक्खा कपडाको विकासको लागि गरिन्छ (फिगर 1).
नयाँ कपडा उत्पादनहरूको विकास सामग्रीमा नै विशेष गुणहरूमा आधारित हुनुपर्दछ, उचित योजना र डिजाइन र प्राविधिक नवीनता मार्फत, सामग्री को फाइदा को लागी पूरा खेल दिनुहोस्, मेकअप गर्नुहोस् वा यसको कमिहरू हटाउनुहोस्, "पालक शक्ति र कमजोर कमजोरीहरू सुल्झाउनुहोस्" क्रममा राम्रो उत्पाद विकास परिणाम प्राप्त गर्न को लागी. उदाहरणका लागि, पारंपरिक शुद्ध कपास उच्च घनत्व नक्कल डाउन कपडा ब्लेन्डिंग को एक निश्चित अनुपातको साथ Yuke रेशम कम प्रारम्भिक मोडुलस संग जोड्न? BVF फाइबर, स्पष्ट रूपमा फेब्रिक टच सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो एन्टी-मखमल प्रभाव को आधार मा, डुभेट कपडालाई बढी नरम र आरामदायक बनाउनुहोस्, अनुभवको उच्च गुणस्तर ल्याउनुहोस्.
(3) विशेषता शैली प्रदर्शन गर्न डिजाइन रचनात्मकताको संयोजन
नयाँ कपडा बजार माग र फैशन प्रवृत्ति को निर्णय संग जोड्न सकिन्छ, शैली नवीनता को विकास, रचनात्मक डिजाइन उत्पादनहरू. निम्न चित्र मा देखाइएको छ, हजार बर्ड केस क्रेप कपडाले विशेष उच्च प्रयोग गर्दछ - उत्कृष्ट रेसमको धागो गणना गर्नुहोस्? BVF फाइबर, कपास स्पानडेक्स कोर-स्पन यार्न टकराव, क्लासिक प्लोभर र डिकोन्स्ट्रक्शन र पुनर्गठनको लागि वर्गहरूको ढाँचा डिजाइन, स्ट्रेट यार्न अनुप्रयोग bilayer संगठन लेख शान्ति कार्ड अन्तराल संग संयुक्त, छाडा प्रकारको पानी फाइबर सामग्रीको सink्क्रमण भिन्नतामा पूर्ण खेल दिन्छ, बबल क्रेप बनावटको त्रिमितीय प्रभाव बनाउनुहोस्, कपडा र स्तरको धनी बनावट.
चित्र4हजार चराको केस फोम क्रेप कपडा
(4) टेक्नोलोजी मोड्युलहरूको एकीकरण अनुप्रयोग फाँट मार्फत
केहि ग्राहकहरुका सरोकारहरु अनुसार, प्राविधिक नवीनता मार्फत लक्षित उत्पादन विकास गर्न. उदाहरणका लागि, कुनै-कुनै लुगाका कपडाहरूमा शरीरको कुनै खास हड्डी चाहिन्छ, र पुन: उत्पन्न सेल्युलोज सामग्री नरम छ. यसका लागि, कपडाको तिब्रता र यान्त्रिक शक्तिमा सुधार ल्याउन फिलामेन्ट कोर-स्पन स्टेपल फाइबर प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ. अर्को उदाहरण खाली कपडा धागो टेक्नोलोजीको अनुप्रयोग हो जुन कपडाको नमी शोषण र द्रुत सुकाउने कार्यलाई अझ सुधार्नको लागि हो, र आरामदायी बुनाई को कपडा को विकास; फ्लफी र नरम आरामदायी टच सिर्जना गर्न कम-ट्विस्ट धागा र अटविस्ट यार्न टेक्नोलोजी लागू गर्नुहोस्, र बुनेको तौंली र स्नानरोबहरू विकास गर्नुहोस्. कपडा नरम र ढीला छैन प्राप्त गर्न प्रयास गर्न नरम कोर धागो प्रविधि प्रयोग.
अधिक जानकारी को लागी, कृपया लेखमा ध्यान दिनुहोस् "बुना रिसायकल सेल्युलोज कपडाहरूको विकास अभ्यास" कपडा समीक्षाको ११ औं अंकमा.
माकुरोले गर्न नसक्ने कुरा गर्नुहोस् -- सुपर कृत्रिम स्पाइडर रेशम फाइबर संश्लेषण मार्ग